Sneakers mpitaingina tendrombohitra an-tampon'ny havoana any China Ririnina mpihaza mpihaza Mans Boots mitaingina tsy mahazaka rano fanamboarana sy orinasa | JIAN ER
Sneakers mpitaingina tendrombohitra an-tampon'ny ririnina ambony mpihaza mpihaza Mans Boots mitaingina tsy miaro amin'ny rano
https://www.jianershoes.com/uploads/SHOWROOM.mp4 Booty an-tampon'ny tampon-tampon'ny rano tsy mihetsika, tsy tantera-drano ary tsy mahazaka akanjo ho an'ny fiakarana an-tendrombohitra. Ny safidy voalohany amin'ny fanatanjahan-tena any ivelany, fitsangatsanganana mahafinaritra sy azo antoka. Ny ambony dia vita amin'ny hoditra, tantera-drano, mahazaka rivotra ary mahatohitra fasika ary mahazo aina amin'ny dia an-kalamanjana. Ny satroky ny rantsan-tongotra dia famolavolana fanoherana ny fifandonana hanoherana ny fasika sy ny vatokely any ivelany ary hanome fiarovana feno an'ireo rantsantanana. Ny famolavolana mpiaro kitrokely avo lenta dia manome comprehensiv ...
Fitaovana ambony: Synthetic, hoditra
Endri-javatra: Fironana lamaody, tsy tantera-drano, anti-malama
Any ivelany tsy misy slip, tsy tantera-drano ary tsy mahazaka akanjo ambony kiraro an-tongotraho an'ny fiakarana an-tendrombohitra. Ny safidy voalohany amin'ny fanatanjahan-tena any ivelany, fitsangatsanganana mahafinaritra sy azo antoka.
Ny ambony vita amin'ny hoditra, tsy tantera-drano, mahazaka rivotra ary mahatohitra fasika ary mahazo aina amin'ny dia an-kalamanjana. Ny rantsan-tongotra cap dia famolavolana fanoherana fifandonana hanoherana ny fasika sy vatokely eny ivelany ary manome fiarovana feno ho an'ny rantsan-tongotra. Ny kitrokely ambonyny endrika fiarovana dia manome fanampiana miaro amin'ny kitrokely ary miaro tsara ny kitrokely amin'ny tongotra tapaka. Drafitra nohamafisina amin'nyny voditongotra ny kiraro mba hanohanana ny tongotra soa aman-tsara, ka manahirana ny manapaka ny tongotra rehefa mandeha. Ny vodin-tongotra manainga voditongotra dia mora ny manainga ary azo ampiasaina ho toy ny tadin'ny kiraro ho an'ny fitehirizana mety.
Non-slip, tahan-mahatohitra, lena ary tsy slip outsole. Naka tahaka ny fitaovana goavambe eny ivelan'ny arabe, fihazonana mafy, mafy sy mahazaka akanjo, mora miatrika ny faritra rehetra, azo antoka ary tsy mikorisa. Ny lamina nify tsy solafaka dia namboarina ara-tsiantifika mba hiatrehana am-pitoniana ireo làlana an-tendrombohitra malama sy mikitoantoana.
Kiraro fitsangatsanganana tsy misy rano
Hoditra / OEM
Izahay dia orinasa kiraro manana mihoatra ny 15 taona ny traikefa ary manana momba Mpiasa 200. Manohana izahayBrand OEM SY serivisy ohatra. Manana orinasan-kiraro matihanina izahay, sampana R&D, ekipa fandraharahana, QC, hanomezana anao tolotra tokana.
Raha te-hanamboatra kiraro ianao dia azonao atao ny milaza aminay ny sary sy ny hevitrao. Aorian'ny andoavanao ny sarany santionany, dia hanao santionany ho anao izahay araka ny takiana. Aorian'ny fanamafisana ireo santionany dia mametraka baiko betsaka ho anay izahay ary mandoa ny vola apetraka, ary haverinay ny sarany santionany. Aorian'ny fanomanana ireo fitaovana ilaina amin'ny famokarana dia mamokatra ny vokatra ny orinasa. Rehefa vita ny vokatra dia hojerena izy ireo. Aorian'ny fanaraha-maso dia halefa izy ireo ary halefa any amin'ny adiresinao. Aorian'ny fanamafisanao ny tapakila dia aloanao ny mizana. Ny etsy ambony dia dingana tsotra amin'ny fiaraha-miasa. Raha manana filàna ianao ary te hiara-miasa, afaka mifandray aminay ianao, hanompo anao matihanina sy hafanam-po izahay.
Teo aloha: China Wholesale Oem / Odm Mandehandeha Lehilahy Vehivavy lamaody Sneakers kiraro Mpiasa sy Hiking
Manaraka: Fahatongavana Vaovao Ravoravo Zapatillas Kiraro manao kiraro mihazakazaka Sneaker ho an'ny lehilahy vehivavy
Baoty mandeha an-tongotra
kiraro mitsangantsangana lehilahy
kiraro mitsangatsangana tsy tantera-drano
kiraro fitsangantsanganana an-kalamanjana